Labo kamid ah ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya oo isku soo dhiibay Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandLabo kamid ah ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya oo isku soo dhiibay Puntland
Labada askari ee ciidamada dowlada Soomaaliya oo isku soo dhiibay Puntland. [Sawirka: Puntland Mirror]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo kamid ah waxa loogu yeero ciidamada qaranka Soomaaliya kuwaasoo ka qaybgalay dagaalkii uu dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Galmudug ee ka dhacay Gaalkacyo, ayaa hubkoodii dhigay waxayna isku soo dhiibeen dowlada Puntland, sida uu sheegay wasiirka deegaanka Puntland.
Isku soo dhiibida ayaa ka dhacday galabnimadii Arbacada magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Shalay ayay ahayd markii Puntland ay soo saartay bayaan, ay ku eedaynayso dowlada federaalka Soomaaliya ciidamadeedu in ay taageerayaan maleeshiyada Galmudug ayna qalab militari gaarsiiyeen maamulka Galmudug.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay dagaalo dhawaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo u dhaxeeyay Puntland iyo Galmudug.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamadda ammaanka Soomaaliya ee ku sugan Muqdisho ayaa ka hortagay labo gaari oo qarax ismiidaamin ah Jimcadii, sida uu sheegay sargaal katirsan ciidanka. Sargaal katirsan ciidamadda dowladda Soomaaliya, oo magaciisa codsaday in aan [...]